Cryptotrading - Zokungena kanye Phuma Amaphuzu - Blockchain Izindaba
Kunini lapho engcono ukuthenga cryptocurrency? Futhi lapho-ukuthengisa? Lemibuto zikude kokungenzi lutho. Kungakhathaliseki ukuthi ukumboza mkhuba ngokuphelele futhi ukuthi uyolahlekelwa inzuzo yakho ku-ukwehla enanini kwempahla kuncike entry ngokuphelele esikhethiwe kahle uphinde uphume amaphuzu. Okokuqala, ake sibheke izincazelo elula we entry kanye ophumayo amaphuzu esekelwe ukwesekwa kanye ukumelana imigqa.
Sithe kakade ukuthi uma ekwakheni umugqa uptrend, sithembela amaphuzu amabili ayinhloko yentengo izithiyo futhi baqinise mkhuba wesithathu. Lokhu Iphuzu lesithathu kuyoba isikhathi esingcono ukuthenga noma ukungena kwimakethe yokuphehla. Namuhla kunesimo esithi asifane bubonakala ngethrendi phansi, kuphela ngaphandle lapha, touch lwesithathu ngolayini intengo ukhonza njengomdala isignali akunakungatshazwa ukuthengisa kwempahla noma uphume emakethe.
Kuvele okwamanje ngempumelelo wokungenela emakethe futhi ikhefu intengo ngokusebenzisa ezingeni ukumelana lapho umfutho we uptrend iqala kuphela ukuthuthukisa. Ukuze wehlise izingozi, esimweni esinjalo kuhle bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla ngokusebenzisa oda umkhawulo ngenkathi ukunaka ekhethekile ukulungiswa esishintshashintshayo.
Kumele kuthathwe njengoba umthetho ukuthi ukwehla zokulungisa akuvamile idlula 38% the last iconsi kuphelile, futhi ngemva kwalokho, intengo phezulu sivame. Kuyinto kule ndawo, igudle vertex zokugcina nokufana kwezinto 38%, ukuthi yisikhathi esihle ukuthenga.
Uma kukhona ecacile izinto zizoshintsha mkhuba kanye emakethe liyana, okuthile ishadi Ungaveza njengoba intuthuko komugqa ukweseka, nefa kumele lithengiswe nge wokubhoboza ubuncane ngenhla lo mugqa. Akunzima ukubamba isikhashana anjalo esikhathini kusaqalwa a downtrend.
Enye isu abasathomako ukuthenga noma ukudayisa kwi countertrend. ngokuvamile, the countertrend inyuka elungisa ukukhula nje ngemuva umugqa wochungechunge, ukuyivala kusukela umugqa ukumelana ku umugqa ukwesekwa. Lapho intengo Othinta lo umugqa, sekuyisikhathi ukutshala izimali zami kule kwempahla.
Esikhathini isimo okuphambene, lapho countertrend ephula umugqa ukwesekwa, turning kube umugqa ukumelana, futhi ikakhulukazi uma izingxenye ukulungiswa eseduze, ithuba ophumayo yimpumelelo kusukela inyuka emakethe.
Lezi zindlela zikufakazela ngokwabo kuthrendi emihle noma emibi evelele, kodwa kukhona indlela yokwenza imali ku-ngamaphasiji ukuzinza isihlobo. Umkhuba lateral kungaletha inzuzo abalandeli short- futhi ukuhweba esimaphakathi. Ukuhlonza iphuzu kahle ethengiwe noma ukuthengiswa, ngokwemibandela ukwehlukana flat mkhuba zone ngumuntu umugqa ovundlile phakathi. A ukwanda intengo ngenhla lo mugqa iyisiginali ukuthenga; iconsi ngezansi ukudayiswa. Le nqubo uncika ukuthambekela emakethe ukuba zikhule noma ukuwa uma bewela umngcele ehlukanisa ke ngesigamu.
Uma uye wafunda kakade indlela ukunquma indlela ajenda izindaba kuthinta ukubaluleka lwemali, ungazama bakwazi ukungena kwimakethe yokuphehla esekelwe izindaba zakamuva. I ubuhlakani lapha wukuthi emakethe akusho ngaso sonke isikhathi usabela nangokunembile nezenzakalo zezwe, futhi siyazi eziningi izibonelo lapho abatshali bezimali baye ithengiswe Bitcoins zabo ngaphandle kokulinda ukukhula ngokushesha nje kwamahora ambalwa zezindaba negative mfihlo kusuka China. We will discuss the intricacies of zokuhweba on the news separately. Okwamanje, Nokho, sincoma abaqhuba amasu echazwe. Yabelana impumelelo yakho nathi bese ulandela Ukuvuselelwa “Hlaziya Lokhu” ingxenye.
TradeFred kuyinto ...
Thumela Previous:Isiphequluli ezisekelwe izimayini isiba kwande
Thumela Landelayo:Belarus ngokusemthethweni Ukuvumela kube semthethweni zonke ibhizinisi mfihlo ezihlobene kanye nokuhweba
April 11, 2018 ngesikhathi 9:56 PM
May 12, 2018 ngesikhathi 8:14 AM
May 22, 2018 ngesikhathi 4:38 PM
May 29, 2018 ngesikhathi 11:33 AM
Juni 2, 2018 ngesikhathi 2:57 PM
I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. Ngombono wami, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will probably be much more helpful than ever before.
Septhemba 4, 2018 ngesikhathi 12:03 PM
Septhemba 14, 2018 ngesikhathi 2:13 PM